1.Difference n'etiti akwado ngwaọrụ gị na iTunes na iCloud
2.Restoring iTunes na iCloud ndabere
3.Recovering data si iTunes iji Dr. Fone maka ios
4.Recovering data si iCloud iji Dr. Fone maka ios
Na-amụba ego nke data anyị na-echekwa na anyị ntị na kọmputa n'oge, mkpa maka pụrụ ịdabere na ezi nkwado ndabere na mpaghara ngwọta amụbawo multi ugboro. Studies ahụwo uto a na ego nke data anyị na-eri na ụlọ ahịa na-amụba a ọnụego nke dị 80% kwa afọ, nke bụ nanị oke.
Ya mere, data N'ezie ghọọ otu n'ime ndị bụ isi akụ nke ndụ n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị na ọ bụrụ na ị bụ onye iOS ọrụ dị ka anyị, mgbe ahụ iTunes na iCloud backups bụ ihe na ị dị nnọọ nwere ike ime na-enweghị. Anyị ga-achọ n'ime otú ahu nagide iTunes na iCloud backups nakwa ewebata ị ndị kasị mma ọzọ dị na anyị handpicked maka gị.
Ọ bụ ike dị nnọọ bulie otu onye si iTunes na iCloud maka akwado gị data Otú ọ dị ka anyị na-agbalị na-aghọta ihe isi ọdịiche ndị n'etiti abụọ iOS ndabere ụzọ.
1) Nchekwa nhọrọ
iTunes echekwa niile ndabere faịlụ na kọmputa gị, PC ma ọ bụ Mac.
iCloud, ebe, na-echekwa na backups on ígwé ojii.
2) Files akwado maka nkwado ndabere na mpaghara
iTunes akwado ibu ọzọ ụdị nke faịlụ maka nkwado ndabere na mpaghara dị ka vidiyo, music, photos (ma na mpaghara igwefoto mpịakọta na mpụga nke ya), ntọala maka n'ụlọ ihuenyo, kọntaktị mere eme - oku na ozi ederede wdg
iCloud na aka nke ọzọ adịghị eme ndabere nke ihe niile, ka ihe atụ, ọ bụla ọdịnaya nke ị na-enweta site na n'èzí iTunes ma ọ bụ App Store dị ka MP3 faịlụ site na a CD, ebudatara videos wdg gaghị kwadoo iCloud.
3) ohere nchekwa
iTunes nchekwa kpam kpam na-adabere na ole ohere i nwere na kọmputa gị, n'ihi ya, ọ fọrọ nke nta ọ na-enye akparaghị ókè ego nke nchekwa.
iCloud awade a kacha nke ruo 1 TB nke ohere nchekwa naanị, nke i si na-akpa 5 GB maka free.
4) Safety atụmatụ
iTunes awade izo ya ezo Otú ọ dị abụghị ndabere nche nhọrọ.
iCloud N'aka awade data izo ya ezo ndabara, na-eme ya a odi mfe nhọrọ.
5) ndabere ụdịdị
iTunes ahapụ gị ike backups na kọmputa gị na ya mere ị ga-mkpa Jikọọ na ngwaọrụ gị n'ụzọ anụ ahụ na iji USB nyere na ya.
iCloud awade a ọzọ adaba ụzọ akwado gị data dị ka ọ nwere ike ndabere ngwaọrụ gị n'elu WiFi.
Option1: Iji iTunes
• Iji malite,-esi ọhụrụ version nke iTunes na wụnye ya na kọmputa gị.
• Next, jikọọ kọmputa gị iOS ngwaọrụ eji a data ma ọ bụ odori USB.
• Mwepụta iTunes na họrọ ngwaọrụ gị ozugbo ọ na-egosi na iTunes window.
• Ugbu a, họrọ nhọrọ nke Weghachi nyere n'ime nchịkọta panel on iTunes.
• Mgbe ọzọ ihuenyo ma ọ bụ window Pop elu, see 'Weghachi' button otu ugboro ọzọ ka nwere iTunes amalite na-akpaghị aka na-eweghachiri ngwaọrụ gị.
• Mgbe usoro nke ngwaọrụ weghachi dị n'elu na ngwaọrụ malitegharia, ị kwesịrị ị na-welcome ihuenyo na 'slide melite' nhọrọ. Nanị, soro ntuziaka nke Mbido nnyemaaka ka iji a gara aga ndabere iji weghachi ngwaọrụ gị kpamkpam.
Option2: Iji iCloud
Get ọhụrụ iOS version tupu ị malite na mgbe ahụ na gị iOS ngwaọrụ, na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> Software Update. Download na wụnye ya, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ a ọhụrụ version nke iOS dị.
Ugbu a, anya maka ọhụrụ dị ndabere - Ị nwere ike ime nke a site na-aga Ntọala> iCloud> Nchekwa> Jikwaa Nchekwa na mgbe ahụ na ịpị n'okpuru Backups ka nwere ndị na ụbọchị na size nke kasị nso-nso ndabere enen.
Get ngwaọrụ gị melite - N'ihi na nke a, ohere Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia wee họrọ nhọrọ nke 'Ihichapu ọdịnaya niile na ntọala'. N'ikpeazụ, mgbe na Mbido nnyemaaka, họrọ 'Mee elu ngwaọrụ gị' na 'Weghachi si a ndabere' na mgbe ahụ nbanye iCloud akpatre.
Ebe a otu ugboro ọzọ họrọ 'Họrọ ndabere' nhọrọ wee jiri ndabere faịlụ na ndepụta dị na iCloud.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ ụwa 1st iPhone, iPad, na iPod aka data mgbake software. Ọ na-enye juru ngwọta naghachi ehichapụ kọntaktị, ozi ederede, foto, ndetu, olu memos, Safari Ibe edokwubara na ndị ọzọ si iPhone, iPad na iPod aka. E wezụga na-agbake data kpọmkwem site iPhone, iPad na iPod aka, ọ na-enye gị ohere iji naghachi data si iCloud na iTunes ndabere faịlụ, na-enye gị 3 ụzọ na-azụ furu efu ma ọ bụ ehichapụ faịlụ. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ọhụrụ iOS 9, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad Air 2 na ndị ọzọ.
N'ihi na nhọrọ na-eweghachiri nke ndabere faịlụ, anyị na-ewetara gị ihe ngwọta kasị mma si n'ebe, Wondershare Dr.Fone maka iOS, ngwa na naputa data maka ngwaọrụ gị enweghị enyemaka nke iTunes ma ọ bụ iCloud. Ị nwere ike pịa ebe a ibudata ya na kọmputa gị wee wụnye ya. Ebe a bụ obere ndu na otú iji ya dị ka mma.
Ẹkedori Wondershare Dr.Fone na kọmputa gị, mgbe ị ebudatara ọ na arụnyere ya na kọmputa gị wee họrọ nhọrọ 'naputa site na iTunes ndabere File'. Ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ niile dị iTunes ndabere maka ngwaọrụ gị na ndị ọzọ. Họrọ ngwaọrụ gị na see Malite iṅomi bọtịnụ.
Ozugbo Doppler bụ zuru ezu, ị ga-enwe ike ihuchalu nkọwa nke niile ọdịnaya, kewara ekewa site dị iche iche ige. Ị nwere ike ugbu akara ndị gị mkpa Natara ma họrọ nhọrọ nke 'Naghachi'.
Họrọ mode nke 'naputa site na iCloud ndabere faịlụ' site na isi interface. Ị kwesịrị ị na-enwe ike ugbu a nbanye eji gị Apple ID na-esote na ihuenyo.
Ozugbo ite ke, ị ga-ahụ listi backups na-esote window / ihuenyo. Ị ga-ugbu a họrọ onye ị ga-achọ iji na-amalite mgbake usoro na na iti 'Malite iṅomi'.
Na-esote na ihuenyo ka ị họrọ faịlụ na ụdị ị ga-achọ ibudatara na gbakee. Ego ndị dị gị mkpa ma kụrụ Ọzọ.
Ozugbo scanning na-okokụre, ị pụrụ nanị họrọ faịlụ na ị mkpa natara na ego ha, si preview window nke software. Mgbe ahụ kụrụ na 'Naghachi' button iji malite usoro nke ga-ekwe ka ị na-azọpụta ndị a niile faịlụ na gị na kọmputa.
Ugbu a na ị maara banyere ihe ndị kasị nkịtị nakwa dị ka ụzọ kasị mma isi nke na-eji na-agbake gị data si iOS backups, nke otu n'ime ndị a na-eme ị na-ahọrọ ndabere gị iOS ngwaọrụ: Ọ iTunes ma ọ bụ iCloud, ka anyị mara.
> Resource> iTunes> Ihe niile ị ga-achọ ịmara banyere iTunes na iCloud backups